Archive du 20190302
Voahangy R sy Mahafaly Olivier Miala any ny didy fampisamborana
Lava ny lisitr’ireo mpitondra teo aloha mety hosamborina. Raha ny loharanom-baovao iray, dia miandry ny tena fampiharana izany sisa. Ireo lohandohan’ny
Rajoelina sy ny ekipany Mifanilika sy miady an-trano…
Nailik’i Andry Rajoelina na lasa anjorom-bala ny ekipa sasany tena nanohana azy.
Seranam-piaramanidina Ivato Natsahatra ny fisavana ny entan’ny olona tonga
Mba ho fanajana ny mpandeha, voatery tsy maintsy natsahatra ny fisavana ny entan’ny olona vao tonga tamin’ny fiaramanidina.
Raharimalala Léa Nandalo ny dingana rehetra teo amin’ny taranja volley Malagasy Hifindra taranja kely isika eo amin’ity pejy manokana ato amin’ny gazety Tia Tanindrazana ity anio sabotsy 02 martsa 2019 . Rehefa nianoka in-droa
« Comité de normalisation » Baolina kitra Malagasy Nivoaka tamin’ny fahanginany 3 volana aty aoriana
3 volana aty aorian’ny nanendrena azy teo amin’ny toerany dia nivoaka tamin’ny fahanginany ny “Comité de normalisation” natao hamaha ny olana mianjady eo amin’ny tontolon’ny fifidianana rafitra
Edito Haingam-pandeha !
Samy manana ny haingam-pandehany io, hoy ny firesaky ny zatovolahy sy zatovovavy rehefa mahita tranga mivaona amin’ny tokony ho izy ao anaty fiarahamonina.
Seces sampana Antananarivo “Tsy ekena ny mpitondra tsy mandray andraikitra !”
Hentitra ny fanambaran’ny avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka eto Antananarivo na Seces
Fanohizana fianarana any ivelany Mila fiomanana tsara
Nanomboka omaly zoma 1 martsa etsy amin’ny hotel Carlton Anosy ary hifarana anio sabotsy 2 martsa ilay “Salon des études Internationales” andiany fahafolo karakarain’ny Madajeune.
Sinoa mitrandraka vato eny Ambohidratrimo Toherin’ny fokonolona hatramin’ny farany
Ampy izay, tsy hanaiky holembenana intsony izahay, hoy ny mponina eny an-toerana.
Mpitandro ny filaminana Anatin’ny safotofoto tanteraka
Tsy mitovy hevitra ny fanjakana sy ny polisim-pirenena noho ny fampiatoana ny asa nosahanin’izy ireo dia ny fanaovana PR (Police de la Route) misahana ny fisavana samihafa toy ny taratasin’ny fiara sy ny mety ho trafika mandeha.
Mpivarotra héroïne iray no voasambotra tetsy Isoraka rehefa namelarana fandrika. Efa am-polon-taonany maro no nanao io asaratsy io izy ary io no namelomany ny vady aman-janany.
Fanesorana mpiasa ECD Velon’ahiahy ireo olon’ny AV7
Mihohoroho, toran-kovitra ireo mpikambana avy amin’ny fikambanana AV7, lasibatra tamin’ny raharaha 7 febroary 2009 teny Ambohitsorohitra.
Madagasikara horakofana ala Atomboka anio any Moramanga
Hosokafana amin’ny fomba ofisialy anio sabotsy 2 martsa 2019 any Analameva-Antsirinala Moramanga ao amin’ny tanin’ny Fanalamanga ny fambolen-kazo nasionaly, ka ny Filoham-pirenena ankehitriny Andry Rajoelina no hanokatra izany.
Vola sandoka Fitaka ho an’ny toekarena
Araka ny sata mifehy ny Banky Foiben’i Madagasikara, voafaritry ny lalàna, dia izy irery ihany no manana fahafahana hamoaka, hamorona ary hanaparitaka ny vola eto Madagasikara.
CNaPS sy ny zon’ny mpiasa Hetsika maro sosona no natao any Antsirabe
Notohizana tany Antsirabe ny fampiofanana momba ny CNaPS izay naharitra 3 andro nanomboka ny 26 febroary ary nifarana ny 28 febroary. Maro sosona ny hetsika.
Hopitaly miaramila etsy Soavinandriana Hiezaka hanakaiky ny vahoaka
Nanatanteraka fifampiarahabana nahatrarana ny taona 2019 tetsy amin’ny CEMES Soanierana ny mpiasan’ny Hopitaly miaramila Soavinandriana omaly zoma 01 martsa.
TIM K 25 Boriboritany fahaefatra Miasa na tsy mbola anaty fitondrana aza
Manoloana ny fitarainan’ireo mpanjifa sy mpitatitra eo anivon’ny toeram-piantsonana eny amin’ny Fasan’ny Karana izay ahitana fako misavovona mety hiteraka aretina sy ny asa fanao
Fampirantiana zavakanto any Venise Omem-boninahitra manokana i Joël Andrianomearisoa
Manomboka amin’ny 11 mey ho avy izao dia hisy faritra hatokana ho an’i Madagasikara (pavillon Madagascar) ao anatin’ilay hetsika “Biennale de Venise”.
MALAGASY Tsy misakafo ara-dalàna intsony noho ny hasarotan’ny fiainana
Tsy misakafo ara-dalàna intsony ny ankamaroan’ny Malagasy ankehitriny.
Fikambanana Assanati Nanampy ny mponina etsy La Réunion kely
Amin` ny fiainana ankapobeny dia samy manana ny sokajiny avy ny olona, ny mahantra, ny antonony ary ny mpanankarena. Matetika anefa dia ny fahantrana foana no ambetin-dresaka sy lazaina fa fahavalo eto amin`ny firenena.
Fakana ny kianjan’Anosizato Tsy manaiky ireo mpanao fanatanjahantena…
Tsy manaiky ary tsy hanaiky ny fakan’ireo mpanam-bola ny kianjan’Anosizato ireo mpanao fanatanjahantena ao anatin’ny Boriborintany fahefatra.
AMBOHIDROA AMBOHIMANARINA Lehilahy very, tany amin’ny tranom-paty no hita
Omaly no nalevina ilay lehilahy iray mananika ny efapolo taona mahery tsy hitan’ny fianakaviany nanomboka tamin’ny herinandro ambony.
Fivarotana sy fanjifana Miala any indray ny “Smart Square”
Anisan'ireo tranobe fivarotana, manatsara ny sehatra asa misy azy ny « Zoma Center » etsy Analakely.
Fanandratana ny soatoavina Malagasy Fanoitra hampandroso ny firenena
Ho fanohizana ny asa eny ifotony sy ny fitetezam-paritra ary ireo ezaka ataon’ny Komitin’ny fampihavanam-firenena (CFM) dia nisy ny famelabelarana sy dinidinika ary ady hevitra momba ny soatoavina Malagasy tetsy amin’ny Arrupe Faravohitra tamin’ny Alarobia 27 Febroary lasa teo.
Tombontsoa ara-barotra Tena sarotiny ny firenena matanjaka
Tena sarotiny ny firenena mandroso rehefa voakitikitika ny tombontsoany, indrindra ny amin’ny ara-barotra.